Hevi-diso 1: Tsy Mety Maty ny Fanahy
Milaza Ny Rakipahalalana Britannica Vaovao (anglisy, 1988), Boky Faha-11, pejy 25, fa lasa neken’ireo filozofa kristianina voalohany ny finoan’ny Grika hoe vao miforona ao an-kibo ny olona dia manana fanahy tsy mety maty.
“Miverina ho amin’ny taniny izy; ary amin’izay indrindra no hahafoanan’ny fikasany.”—Salamo 146:4, Fandikan-teny Protestanta.
Milaza koa ny Baiboly fa “tsy mba mahalala na inona na inona” ny maty. Lazainy fa tsy afaka mitia na mankahala izy ireo, ary “tsy misy asa, na hevitra, na fahalalana, na fahendrena, any amin’ny fiainan-tsi-hita” na Fasana. (Mpitoriteny 9:5, 6, 10, Prot.) Maty tanteraka àry isika rehefa maty. Toy ny afon-dabozia ny aintsika. Tsy mandeha na aiza na aiza ilay afo rehefa maty, fa tsy misy intsony fotsiny.
Ny finoana hoe tsy mety maty ny fanahy no nampipoitra an’ireto fanontaniana ireto: Mankaiza ny fanahin’ireo maty? Inona no mitranga amin’ny ratsy fanahy rehefa maty izy ireo? Nanjary nanaiky hevi-diso hafa ireo milaza azy ho Kristianina, rehefa nino hoe tsy mety maty ny fanahy. Tsy inona izany fa ny afobe.
Ampitahao amin’ireto andininy ireto izany: Genesisy 3:19; Mpitoriteny 3:19, 20; Matio 10:28
Tsy misy intsony ny olona rehefa maty
Hizara Hizara Hevi-diso 1: Tsy Mety Maty ny Fanahy
w09 1/11 p. 4